Fangaro amin'ny menaka azo avy amin'ny menaka manakaiky ny solika
Home / Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana / Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa / WOWOW-Solika-menaka manaka-menaka mikororoka Faucet mando midorehitra
WONOW-menaka mikorotaka WOWOW -Mampiasa amin'ny kitapo fandroana tafahoatra
naoty 4.81 avy tany 5 mifototra amin'ny 16 mpanjifa naoty
(16 mpanjifa famerenana)
Fanamboarana rano mora
Ny famolavolana volavolan-drafitra tsotra sy azo tsapain-tanana dia mamela anao hanamora ny haavon'ny rano sy ny mari-pana miaraka amin'ny lakroa roa.
Fampidinana aerated ho an'ny fanadiovana isan-andro
Mamoaka hatramin'ny 1.5 gony isan-minitra, ny faribolana ao amin'ny efitrano fandroana dia manome renirano tsy mihetsika, ka ilaina ho fanadiovana andavanandro. Ny haavony dia avo be, manome anao be dia be eo ambanin'ny spout.
2320300ORB torolàlana fametrahana
Avy amin'ny kamory miakatra 4 ka hatramin'ny 16 santimetatra dia 2320300ORB amin'ny 3-hole mounting, ny elanelana dia arakaraka ny tena takian'ny tena.
Fanalahidy ambany kofehy amin'ny fanosotra mainty faran'izay maoderina, famolavolana spout haingam-pandeha tsy manam-paharoa izay natao amin'ny famoronana fomba fanamboarana moderina maoderina sy mahazatra.
Mifanaraka trano hofidina, condo vaovao, efitrano tokana, trano môtô, tranofiara fitaterana ary fampiasa amin'ny fianakaviana.
Mihazona ny mahitsy amin'ny famolavolana ergonomika, ny habeny mety mifanaraka amin'ny fifehezana, mahazo aina ihodina.
Azonao atao ny mampiasa azy amin'ny ezaka kely sy amin'ny fomba tsotra.
Fomba rano: mandeha
Fianganan'ny rano: mifangaro mafana sy mangatsiaka
Ny tsindry rano: sakana kely indrindra 0.5 bar, 1.0 bar no naroso
Fitaovana vatana lehibe: Fanamboarana varahina
Hivoatra: baoritra misy karatra marika
Fitaovana enta-mavesatra: Zinc-Alloy
Vita: Zavona manondraka menaka
Karazana fametrahana: nitehirizana ny setroka
Isan'ny Holes ilaina: 3
Fahalemem-boninahitra Max: 1.38 ″
Ireo teboka mafana sy mangatsiaka azo esorina, azonao atao ny mandray ny tànana mba hanondro amin'ny làlana izay ilainao.
Ahentina azo esorina manokana
Aoteran'ny haino aman-jery avo dia afaka manolotra mikoriana malefaka, afaka mamonjy rano mihoatra ny 50%.
Ny aerator dia azo afahina, afaka manadio na misolo azy mora ianao.
Mora ny mifehy ny rano sy ny maripana tsara.
Famolavolana fihodinana 360 degre ho an'ny fampiasana mety.
Fifandraisana mifandray haingana
Ny fananganana haingana fananganana haingana haingana.
Mora amboary irery tsy misy plumber.
Hofehezina mafy amin'ny alalan'ny teknika ny mpampifandray, tsy misy leakage.
Ny fitaovana varahina matevina tsara kokoa noho ny vy hafa
Tsy mila manahy momba ny olana misy harafesina, korosi.
Ny fitaovana avo lenta, fanamorana ny fikojakojana, fitoniana avo, maharitra ny fiainana.
SKU: 2320300ORB Sokajy: Faucets fandroana indroa ho an'ny trano fandroana indroa, Fitaovana efitra fandroana efitra fandroana Tags: vilia mifangaro, lavaka telo, Fandraisana roa
12.5 X 10.1 X 3 santimetatra
Varahina vita amin'ny menaka
K *** f2020-06-11
Somary nisalasala ihany aho nividy ity entana ity noho ny vidiny ambany dia ambany. Nividy ireto karazana faucet ireto foana aho tao amin'ny magazay Fanatsarana trano ary nandoa 300 $ farafahakeliny ho an'ny tsirairay amin'izy ireo. Rehefa avy nametraka an'ity tao amin'ny efitrano fidiako aho dia nahavariana ahy tokoa ny fiasan'io. Varahina avokoa ny fifandraisana rehetra ary namboarina tsara avokoa ny gasket rehetra. Toa vita tsara ihany koa ny famitana vy. Mora be ny fametrahana.
L *** ny2020-06-16
Nanafatra ireo aho satria mitovy amin'ny sasany ao amin'ny Home Depot sy Lowe ny antsasaky ny vidiny. Tena tiako ny fomba niarahan'izy ireo nametraka.
*** B O2020-06-19
Nampiasaina tamin'ny fanamboarana efitrano vovoka izy io. Faly be, indrindra amin'ny vidiny aloa. Tonga soa aman-tsara fonosana. Fomba tsara, mety ary vita. Ny faucet dia mahatsapa mavesatra maivana izay nahatonga ahy hanontany kalitao, nefa mandeha tsara. Ny knobs mafana / mangatsiaka dia mihodina milamina ary mandeha tsara. Ny kitapo fametrahana ary mampifandray haingana dia nahatonga ny fametrahana azy ho rivotra. Tsy azo antoka 100% fa apetrako amin'ny fampiasana mavesatra izany, mitaky tontolo sarotra nefa fantatro izay fantatro, hividy an'ity indray aho.
Famaranana tsara toa maharitra. Mahatsiaro ho matanjaka ny tahony ary hita eo amin'ny toerany izany amin'ny zavatra hafa rehetra ao amin'ny efitrano. Sanda tsara, indrindra ho an'ny miely. Mametraka madio ao ambony zava-poana. Mariho fa mipoaka / midina ny tatatra amin'ny alàlan'ny fanosehana ny takona fa tsy amin'ny tsindry / hisintona bara. Tiako io endri-javatra io satria mitazona fidiovana madio foana izy io.
A l ***2020-06-27
Ho an'ny vidin'ity faucet ity dia tena faly aho amin'ny fividiananay. Napetraky ny vadiko teo ambony latabatray izany talohan'ny nametrahanay ny kabinetra ka mora ny nametraka azy. Manana endrika indostrialy kokoa io, saingy tiako izany. Nofonosina tamim-pitandremana ihany koa izy io izay tiako ny miantoka fa tsy hisy ho voarangotra.
Nividy roa tamin'ireo aho ary lafo ny vidiny. Ny faucet dia matanjaka sy voaorina tsara. Ny fifandraisana dia tsara ary tsy mbola nanana olana tamin'ny fivoahana aho. Mora ny mametraka azy, toa tsara ary mora diovina. Manoro hevitra an'io aho.
L f ***2020-07-12
Faly be aho amin'ity faucet ity. Te-hanavao ny efitranonay izahay ary manana teti-bola kely. Tiako ny fijery an'io fa ny hafa azo ampitahaina dia $ 100 +. Nividy an'ity tamin'ny antony niniana nifototra tamin'ny hevitra tsara hafa ary faly fa nanao izany. Mikasa ny hividy hafa aho amin'ny fanavaozana ny fandroana manaraka!
Faucet manaitra tanteraka. Mora apetraka. Contemporary sy malama. Mavesatra ary vita tsara ihany koa. Hividy ny vokatr'izy ireo indray!
Nifampiraharaha tamina faucet iray aho izay tsy namela rano hikoriana tao anatiny. Nividy an'io ho an'ny bokotra boribory aho ary nahagaga ny fahasamihafana. Fametrahana tsotra izy io ary toa mahatalanjona ary koa miasa be loatra ka ilay lafo be izay nosoloiko. Tena soso-kevitra!
Fitiavana tanteraka! Izay rehetra toa an'io tao amin'ny magazay dia 150 $ na mahery ary tsy niaraka tamin'ny tatatra, ity dia toa mahavariana ao amin'ny trano fidiako! Mendrika isaky ny denaria
*** J R2020-07-30
Faucet mahafinaritra! Izy io dia niaraka tamin'ny zava-drehetra napetraka, ao anatin'izany ny hosotra fametahana 1/2 ka hatramin'ny 3/8 eo amin'ny 15 santimetatra ny halavany. Sambany aho tsy nila nankany amin'ny magazay hahazoana faritra bebe kokoa!
J *** ny2020-08-02
Tsy liana tamin'ny fandoavana vola zato ho an'ny faucet fandroana aho fa tena te hanana iray tsara.
Ho an'ny $ 80 ity iray ity dia tsara kokoa noho ny efa nampoiziko .. Toa lafo, miasa be, faly fa nanararaotra aho
Vahaolana ara-toekarena ho an'ny trano fandroana, famolavolana ankehitriny, tahony lever ary tsy misy frill mipoitra tsy misy tehina misintona.
Tiavo tanteraka ireo faucet ireo! Tena sarobidy ho an'ny vola. Mora ihany koa ny mametraka! Tsy mety diso amin'ireo.
*** N N2020-08-24
Tiako ny fijerin'ny faucet, kely fotsiny izany amiko. Mora ny mametraka fotsiny fa maniry kely kokoa. Fa mendrika ny vola.
P *** ny2020-08-29
Ity faucet ity dia toa MAHAFINARITRA ao amin'ny trano fidiako. Tena hanafatra 2 fanampiny ho an'ny efitrano fidiako vahiny !!
WOWOW Sink Finkcet 4 Inch Center Oil Ru ...